Ukuya Kuphi u-Eva Unyaka Omtsha e-Houston
Eunited States ETexas Houston
Uhambo lweNtsha olutsha lweNyaka e-Houston
I-Houston kunye neendawo zayo ezikufutshane zizaliswe ngoNyaka woNyaka woNyaka. Kukho amaqela ehotele, amaqela okutya iwayini, amaqela ase-hipster, amaqela afihlakeleyo okubulala, kunye namaqela aqhelekileyo amaqela. Jonga ngezantsi ukufumana okulungileyo kuwe.
U-Eva Wonyaka omtsha kwi-CityCentre
Hlola ngeSixeko saseCentral ukukhupha ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye kwiindawo ezininzi kunye neendawo zokudlela. Amaqela aphile aya kudlala kulo lonke ubusuku, aze afike phakathi kwamabili, kuya kubakho i-confetti ye-epic drop.
Umcimbi uhamba ukusuka ngo-9: 30 ukuya ku-12: 30 ekuseni, kodwa ukuba oko kukudlule ixesha lokulala kwakho, i-CityCentre iyakubamba i-Eve yeNyanga ka-Noon ngeempawu zezinto ezinobungqina bentsha kunye nemisebenzi, kunye ne-DJ kunye neyure yeeyure. Nangona iindleko zokupaka malunga ne-$ 10, zombini iziganeko zikhululekile kwaye zivulelekile kuluntu.
I-Sugar Land Town Square
Nangona isixeko seSuar Land asisabikho sithuba saKhisimali sonyaka oNyaka omtsha, amashishini kwisikwere esikhulu sedolophu anika umnxeba wemisebenzi. Ukusuka kwipayipi phantsi kwezibane ezimnyama, kwiibhonkco ze-jazz, kwi-bar specials, mix and match your favorites to ring in the new year.
Uhambo lweNtshonalanga kaNyaka omtsha wokuPhumela umlilo kwiDieren Cruise
Yenza lo nyaka omtsha ungalibaleki ngaphakathi kweYafa yaseFantaSea yeCawa ecacileyo. I-$ 175 ngomlinganiselo wamanani omntu unika isidlo esisisigxina, izibheno kunye nomculo omningi, kunye ne-tiaras, i-champagne toasts kunye ne-party-favor. Ibhodi ivela ngo-8 ntambama ukuya ku-9 ntambama, kwaye i-cruise iya ku-12: 30 ekuseni. Izaphulelo ziyafumaneka kulabo abasemkhosini kunye nabantu abadala abaneminyaka engama-55 nangaphezulu.
Umkhosi woNyaka woNyaka woNyaka woNtsapho kwiKemah Boardwalk
Ukuba awuzange ube nethuba lokujonga enye yezinto ezikhangele phambili zeHoston , uEva kaNtshonalanga ixesha elide lokwenza. Khupha yonke intsapho ku-Kemah ngomculo, izixhobo zomlilo kunye nemisebenzi yentsapho. Umlilo uqala ngo-10 ntambama
Umthendeleko woNyaka woNyaka omtsha kwi-Houstonian
Ihotele yaseHoustonian isebenza okhethekileyo ngamnye oNyaka omtsha oquka isidlo sakusasa, ukuvelisa iwayini kunye ne-champagne, kunye neendawo zokuhlala kunye ne-brunch ngosuku olulandelayo.
Ithegi yentengo iqhubela phezulu kuma-650, kodwa yonke into ifakiwe, kwaye iyabelana namanye amaqela ngaphandle. Ayikho indlela embi yokunyakaza kunyaka omtsha.
Westin Ihotele yeSikhumbuzo Isixeko
Ukufumana amava e-hotele-friendly friendly, iWestin Hotel eSikhumbuzo Isixeko sinika isiganeko sikawonkewonke samahhala ukususela ngo-8: 00 ukuya ku-1 ekuseni, equka umculo ophilayo kunye nesinambiso esincinci phakathi kobusuku, kunye neentlobo ze-cocktail kunye neentlobo zothando. Awudingi ukuba uhlale ubusuku, kodwa ukuba ungathanda, ihotele nayo ine-Eve ekhethekileyo yoNyaka omtsha, igqibe ngokutya kwasekuseni kunye nokukhangela kwangoko.
Ukuba awunakucingi ukuba ulungele izinto ezincinane, lo mbhiyozo wangaphandle uDick Clark kwi-jumbo isikrini, i-popcorn kunye ne-Eve yonk Isiganeko senzeke ukususela nge-9: 00 ebusuku-phakathi kwamabini, kufuphi neMaggiano kunye ne-Cheesecake Factory ngaphandle kweGessner Road. Iintsapho zinokudla kwi-Eve yeNyaka ka-No-11 ukusuka ngo-11: 00 ukuya ku-12: 30 ntambama, kunye ne-balloon drop, i-lemonade kunye ne-DJ.
Ngaphakathi kweHouston: I-Mark Haber ye-Brazos Bookstore
Izinto ezilungileyo kakhulu ngeHouston
I-Best Best Hotels ku-Houston ka-2018
Eyona ndawo ihamba phambili kwiPattle Dogs eHouston
Imbali yokuzamazama komhlaba yavela eDetroit naseMichigan
Iingcebiso zeZiko zohambo lweAfrika
Izifo ezihamba phambili ezihamba phambili kuneZika
Iiholide eziphilileyo eMexico
Indawo yokutyela yaseMilwaukee
Ukukhangela i-Lobster engabizi kwindawo yeBoston?
I-Cliff yoLwandle-I-Long Island yoBomi bemiPhakathi
Yintoni enokuyenza kwiSonto leMisebenzi yeeMpilo yaseMilwaukee
Indlela yokufumana iSitolo seMAC ePrague
Usuku loMthendeleko weeNgqungquthela kunye noSuku lokuvuna u-Phoenix
Ukuchitha iiholide eSan Antonio
Ukuya Kuya Kukhohlisa-okanye-Ukuphathwa eSan Jose
Amahhala okanye amaNyuzi aMatye angabonakaliyo eSan Francisco